कपिलवस्तुको बुढ्डीमा थारु माघी खिचडी महोत्सव सुरु, यस्तो भयो उद्घाटनसस्त्र « Mayadevi Online News Portal
कपिलवस्तुको बुढ्डीमा थारु माघी खिचडी महोत्सव सुरु, यस्तो भयो उद्घाटनसस्त्र
प्रकाशित मिति : २९ पुष २०७७ बुधबार १९:३३
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ४ बुड्ढीमा थारु समुदायको महत्वपूर्ण माघी पर्वको अवसर पारेर माघी खिचडी महोत्सव सुरु भएको छ । बुड्ढीको थारु गाउँमा दुई दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा थारु समुदायका कला, संस्कृति, भेषभूषा, खानपानको अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उद्घाटनसस्त्रमा उपस्थित अतिथिहरु
थारु समुदायका प्रख्यात झुमरा, लाठ्ठी लगायतका नाचको प्रदर्शनसंगै ढिकरी, घोगी लगायतका थारु परिकारको स्वाद चाख्न पाइने महोत्सवमा व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लाठ्ठी नाच नाच्दै थारु समुदायका कलाकारहरु
गत बर्षदेखि प्रत्येक माघी पर्वको अवसरमा महोत्सव आयोजना गर्न सहयोग गर्दै आएको वडा नं. ४ ले यो बर्षपनि निरन्तरता दिदैं खिचडी महोत्सवको आयोजना गरेको हो ।
झार्रा नाच नाच्दै कलाकार ।
तराईका धर्ती पुत्रका रुपमा रहेका आदीबासी थारु समुदायको पुराना संस्कृतिको जगेर्ना स्वरुप हरेक बर्ष वडाको सहयोगमा खिचडी महोत्सव सञ्चालन हुँदै आएको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष पवनकुमार थारुले बताउनुभयो ।
खिचडी महोत्सवको बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठ, उप प्रमुख मिरा थारु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेल, वडाध्यक्ष पवनकुमार थारु लगायतले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
खिचडी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले थारु समुदाय भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षणमा अहिलेका युवा पिढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । थारु समुदायको संस्कार, संस्कृति बचाउनका लागि बुड्ढी गाउँमा थारु संग्राहलयको स्थापना गरिएको बताउँदै नगर प्रमुख श्रेष्ठले बरकुलपुरमा थारु होमस्टेको अवधारण ल्याइएको बताउँनुभयो ।
आफ्नो मन्तव्य राख्दै नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठ ।
नगर उप-प्रमुख मिरा थारुले आधुनिकताको नाममा आफ्नो पुरानो संस्कृतिलाई लोप हुन दिन नहुने बताउनुभयो । अहिलेका युवापिढीलाई पुरानो संस्कृतिबारे जानकारी गराउन यस्ता महोत्सवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आफ्नो मन्तव्य राख्दै उप-मेयर मिरा थारु ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेल थारु समुदाय आफ्नो संस्कृतिमा धनि रहेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तराईका आदीबासीका रुपमा रहेका थारु समुदायको संस्कृतिबारे खिचडी महोत्सवले आफुलाई बढी जानकार बनाएको भन्दै कार्यक्रम सफलताको उहाँले शुभकामना दिनुभयो ।
आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेल ।
दुसरा वडा स्तरीय माघी महोत्सव २०७७ अउर नवाँ बर्ष मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष बेचन थारुको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटनसस्त्रमा थारु कल्याणकारी सभाका कोषाध्यक्ष शिवानी थारु, साना किसान बुद्धभूमिका अध्यक्ष पदम खनाल लगायतले बोल्नुभएको थियो । थारु जातिका पुराना संस्कृति झल्कने गीत र नृत्य प्रस्तुत कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य गोपाल चौधरीको रहेको थियो भने सञ्चालन थारु अगुवा हरिलाल चौधरीले गर्नुभएको छ ।
वाणगंगामा ओली समूहको नगर कमिटी बैठक बस्यो, को को भए…
मायादेवी अनलाइन, चारनम्बर ।नेकपा ओली समूहको वाणगंगा नगर कमिटीको बैठक